Ahoana no hananatra ny alika | Tontolo alika
Ahoana no hananatra ny alikako
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao no tratry ny fisalasalana ny amin'izay hataonao hampazava azy fa nanao zavatra ratsy izy; ahoana ny anatra ny alikako amin'ny fomba mahomby nefa tsy manimba anao. Isika rehetra dia efa nanontany ny tenantsika tamin'io fanontaniana io ihany, ary azo inoana fa efa naheno ianao nilaza fa tokony hokapohinao amin'ny gazety na ny toa azy ianao, na ny fanosihosanao ny orony amin'ny ranony mba tsy hataony izany intsony. Ireo teknika ireo dia efa nilaozan'ny toetrandro, ary tsy nanaporofo fa mahasoa mihitsy izy ireo; tena mifanohitra tanteraka amin'izany: amin'ny fihetsika manao toy izany, ny hany zavatra ho tratrarintsika dia ny fananana alika matahotra, izay handositra antsika.
Noho izany, Ahoana no hananatra ny alika nefa tsy handratra azy?
Mba hananana namana volo mpanabe sy sambatra, zavatra telo no ilaina: faharetana, tapaka y fanajana. Rehefa tsy eo ny iray amin'izy ireo, ny fanabeazana alika dia lasa asa sarotra tokoa, tena sarotra, ka afaka mamoy haingana ny hozatrao isika ary manao zavatra tsy tokony hataontsika ary mety hanimba ny alika. Toy izany koa, tsy azontsika atao ny mibedy azy raha toa ka tezitra isika amin'izay fotoana izay, satria tsy mety io na, farafaharatsiny, tsy ilay irina.
Raha te hampahafantatra azy isika fa nanao zavatra tsy mety izy dia tsy maintsy manao izany sambory izy izao; izany hoe tsy azontsika atao ny mibedy azy ireo noho ny zavatra nataon'izy ireo ny maraina na ny iray andro lasa, satria tsy manana ny fahaizantsika mampifandray ireo toe-javatra taloha amin'ny fanehoan-kevitra ankehitriny izy ireo.
Noho izany, tena ampirisihina mafy raha vantany vao tsy mitondra tena izy, lazao aminy ny mafy TSIA (tsy mikiakiaka) ary aza raharahiana mandritra ny 10 segondra, aorian'izay dia afaka manome loka anao izahay isaky ny manova ny fomba toetranao ianao. Raha sanatria mikotrika amin'ny tany izy (na mikasa ny hanao izany izy), ho fanampin'izay dia hoentinay mivoaka any an-jaridaina na hitsangatsangana izy.
Raha nandrava fanaka, kiraro na akanjo ianao, na kely aza ny zavatra tianay amin'ny faharetana dia mila manam-paharetana izahay tadiavo ny anton'ny fihetsik'izy ireo: Tsy manao zavatra ara-batana firy ve ianao? Milalao matetika miaraka amin'ny fianakavianao isan'andro ve ianao? Manao ahoana ny toe-tsainao? Amin'ny famaliana ireo fanontaniana ireo dia afaka mamaha ny olana isika, ka manakana azy tsy hiverina indray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana no hananatra ny alikako
Ahoana no hampiofanana mpiandry alemanina
Ahoana ny fomba hisorohana ny alikako tsy hitsambikina amin'ny olona